ရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါး အသက်ရှည်ကျန်းမာနေကြသော ဟောလိဝုဒ်အကျော်အမော် (၁၅)ဦး - ONE DAILY MEDIA
ရာစုနှစ်တစ်ခုထက်ပိုပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာ ယုံတမ်းစကားတစ်ခုမဟုတ် ကြောင်း ၁၂၆ နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ Jeanne Calment ကသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ရာစုနှစ်တစ်ခုနီးကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အသက်ရှည်ကျန်းမာမှုအတွက် စံနမူနာကောင်းများဖြစ်တဲ့သူတချို့ကိုစုစည်းထားပါတယ်။။ ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်သာမကသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်အတွက်ပါ ရာဇဝင်တွင်ခဲ့ကြပါတယ်။
မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်မသွားသေးသော နာမည်ကျော်များစာရင်းကို ဂုဏ်ယူစွာ ဝေမျှ လိုပါတယ်။ အဆုံးမှာတော့ Sean Connery ကိုယခင်နှင့်ယခု ပုံကိုလည်း သင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ မကြာခင်သူလည်းအသက် ၉၀ ကျော်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ ထိုအချိန်ကထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။။ ယခု Olivia de Havilland ဟာ Classic Hollywood ၏“ ရွှေခေတ်” ၏နောက်ဆုံးကျန်ရစ်သူ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင် ၄၉ ကားတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပါတယ်။
2. Her Majesty Queen Elizabeth II, then and now. She is 93 currently
ဘုရင်မကြီး Elizabeth II ကို ၁၉၂၆ ခုနှစ်ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ ၁၉၅၂ တွင်ဘုရင်မအဖြစ်ကြေငြာခြင်းခံရပြီးယခုထိတိုင် အဆိုပါ အံ့ဖွယ်အမျိုးသမီးဟာ လှပနေဆဲဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံသူမ၏ပုံဟောင်းများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်လွမ်းဆွတ်တမ်းတစေပါသေးတယ်။
3. Cicely Tyson is 94 and it feels like she doesn’t get old
သူ အနုပညာသက်တမ်းဟာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာနေပြီဖြစ်‌ သော်လည်း ထက်မြက်သောမင်းသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ရုံသာမကအရွယ်တင်‌ သော အမျိုးသမီးတစ် ဦး လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို ၉၄ နှစ်ဟုယုံကြည်ရန်ခက်ခဲလျက်ရှိပါတယ်။
4. Eva Marie Saint then and now, at the age of 95
ထိုအမေရိကန်မင်းသမီး၏အနုပညာသက်တမ်းဟာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ရှိပြီဖြစ်ပြီး သူမဟာ Hollywood Walk of Fame တွင်ကြယ် ၂ ပွင့်ရှိပါတယ်။
5. Vera Lynn is 102 and we love her for her contributions to culture
6. Harry Belafonte then and now, he’s 92 today.
သမိုင်းတွင်အအောင်မြင်ဆုံးဂျမေကာ-အမေရိကန်ပေါ့ပ်စတားများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကာရစ်ဘီယံဂီတပုံစံကိုလူသိများပြီးနိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေက သူ့ကို“ King of Calypso” လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
7. Betty White is 97 now and she is adorable.
Betty White ဟာ သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး အမျိုးသမီး ရုပ်သံတင်ဆက်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၈၀ ကျော်ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်ပြ သူမသည် sitcom (Elizabeth with Life) ကိုပထမဆုံးထုတ်လုပ်သည့်အမျိုးသမီးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံထားရပါတယ်။
8. Angela Lansbury is 93 today.
သူမရေးသားသော American Murder, She wrote ဇာတ်လမ်းတွဲ၌သူမနှင့်စာရေးဆရာမ Jessica Fletcher တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့စဉ်တွင်နိုင်ငံတကာထိကျော်ကြားခဲ့ပါသေးတယ် ။Disney၏ Beauty and the Beast မှ Mrs. Potts ကဲ့သို့ သူမ၏ချစ်စဖွယ်အသံကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့သဘောကျခဲ့ကြရပါတယ်။
9. Dick Van Dyke then and now, at the age of 93
ဒီဟောလိဝုဒ် အကျော်အမော်ကတော့ Hollywood Boulevard ရှိ Hollywood Walk of Fame တွင်ကြယ်တစ်ပွင့်ရှိပြီး Disney Legend အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသူလဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏အပြုံးဟာ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး သူ့ကိုနောက်ထပ်ပျော်ရွှင်သောနှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းစေချင်ပါသေးတယ်။
10. Marge Champion is 99 today
သူမဟာ ထက်မြက်သောအကပညာရှင် မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ် ။ Marge Champion ဟာအမြဲလိုလို ကြည့်ကောင်း နေပြီးငယ်ရွယ်ပုံလဲ ပေါ်ပါတယ်။
11. Cloris Leachman is over 93 now
Primetime Emmy Awards ၈ ကြိမ်ရရှိခဲ့သူ သူမကို Fox sitcom Malcolm in the Middle ၌ Grandma Ida အဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ၂၀၀၈ တွင် တော့ Bob Saget ၏ Comedy Central Roast တွင်အကင်လုပ်သူအဖြစ်တွေ့မြင်ရမှပါ။
12. Diana Serra Cary is exactly 100 today
Diana Serra Cary ကို Baby Peggy ဟုလူသိများပြီး သူမဟာ အသံတိတ်ရုပ်ရှင်လောကခေတ် ကလေးသရုပ်ဆောင်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ Diana Serra Cary ကို စာရေးသူနှင့်အသံတိတ်ရုပ်ရှင်သမိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး သူမရဲ့ သမိုင်းကြောင်းဝတ္ထုအပါအ ၀ င်စာအုပ်များစွာကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။
13. Norman Lloyd is already 104 now
သူသည်အမေရိကန်သရုပ်ဆောင်နှင့်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဆယ်စုနှစ် ၉ ခုကျော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် Lloyd သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Drama ဇာတ်ကား St. Elsewhere တွင် Dr. Daniel Auschlander အဖြစ် သရုပ် ဆောင်ခဲ့ပြီး မျိုးဆက်သစ်ပရိတ်သတ်များ၏ အားပေးမှာကိုပါရရှိခဲ့ပါတယ်။
14. June Lockhart turned 94 in June
၁၉၅၀ နှင့် ၁၉၆၀ ခုနှစ်များမှ ရုပ်ရှင်များနှင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများဖြင့် သူမကို အများစုသိခဲ့ကြပါတယ်။ သူမဟာ Emmy Award ဆန်ခါတင် ၂ ကြိမ်ကါဝင်ခဲ့ပြီး Tony Award ဆုရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
15. Kirk Douglas is an unbelievable 102 years old.
Kirk Douglas ဟာ ရုပ်ရှင်လောက၏ Golden Age ၏နောက်ဆုံးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။သူ၏အနုပညာသက်တမ်းကာလအတွင်းရုပ်ရှင် ၉၀ ကျော်၌ပါဝင်ခဲ့သပပြီး ၁၉၉၁ ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ တွင်လေဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Bonus:James Bond မင်းသားဟောင်းကြီး Sean Connery -88 years old
ထိုမင်းသားကြီးကတော့ မမေ့နိုင်ဖွယ် ရုပ်ရှင်သူရဲကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ရုပ်ကိုသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူကို အတော်တော်များများက ချစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ Connery ကဒီဇာတ်ကောင်ကိုသရုပ်ဖော်တဲ့ပထမဆုံးမင်းသားလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့အခါသူဟာ ရုပ်ရှင်လောကမှ အနားယူပြီး အသက် ၁၀၀ နီးလာပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။